गलवानमा भारत–चीन झडपबारे सनसनीपूर्ण खुलासा, नराम्ररी पराजित भएको थियो चीन ! – Dcnepal
गलवानमा भारत–चीन झडपबारे सनसनीपूर्ण खुलासा, नराम्ररी पराजित भएको थियो चीन !
प्रकाशित : २०७७ भदौ २८ गते १६:१६
समाचारमा अगाडि भनिएको छ ‘गलवानमा भारत–चीनबीच भएको भिडन्त यी दुई देशबीच ४५ वर्षमा पहिलो पटक खतरनाक भिडन्त थियो । विवादित क्षेत्रमा घुस्नु चीनको बानी हो । खासगरी १९६२ को हारपछि पक्षघातग्रस्त भएको भारतीय नेतृत्व र जवान सुरक्षात्मक रहन्छन् । तर, गलवानमा यस्तो भएन । यहाँ कम्तीमा ४३ चिनियाँ सैनिकको ज्यान गएको मानिन्छ । पासकले त मारिने चिनियाँ सैनिकको संख्या ६० भन्दा बढी हुने बताउँछन् ।